> Resource> Video> Olee otú iji tọghata Video ka Nexus 7
Zụta a Google Nexus 7 na chọrọ igwu vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri na ọhụrụ Nexus mbadamba? Ruru ka a 7 "Back-udo IPS ngosi na 1280x800 mkpebi, ọhụrụ stof bụ nnọọ ukwuu n'ihi na video ụtọ n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. Otú ọ dị, nanị ihe ọ na-akwado ole na ole video formats. Ya mere, ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime gị videos na-na na na gị ọhụrụ Nexus 7, karịsịa zụrụ Amazon WMV videos wdg
Iji nyere ị na-egwu ọ bụla video on Nexus 7, Wondershare otu amalite a dị ike software - Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). A na ngwa bụ ike inyere gị aka tọghata ọ bụla video ka Nexus 7 akwado video formats. Na ya, i nwere ike na-eche na-enwe ihe ọ bụla video ma ọ bụ fim na Nexus 7 mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla ị chọrọ. Ugbu a, dị nnọọ na-eso m iji tọghata gị videos ka Nexus 7 na-egwu were were.
1 Tinye video faịlụ ka nke a video Nexus 7 Ntụgharị
Họrọ video faịlụ na ị chọrọ iji tọghata na kọmputa, na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ ha ka ha na-ekpe ebi ndụ nke ngwa a. Ma ọ bụ i nwere ike na-pịa bọtịnụ na a na ngwa isi interface na-agagharị na kọmputa gị ma họrọ ị chọrọ videos mbubata.
2 Họrọ a kwesịrị ekwesị format dị ka mmepụta format
Mbụ, ka m hụ Nexus 7 akwado video format: 720P HD video MPEG4, H.263, H.264 na DivX.
Ya mere ebe a, anyị họrọ MP4 na MPEG4 codec dị ka mmepụta usoro. Ugbu a, ka m na-eje ije gị site na ime. Pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, wee họrọ "MP4" si "Format"> "Video" udi. Ọzọ, see "Ntọala" nhọrọ na isi interface na ịtọ mkpebi dị ka 1280 * 720.
3 tọghata video ka Nexus 7
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ see "tọghata" button na ala-nri akuku nke a na ngwa isi interface. Ọ pụtara na ị ẹkedori a na ngwa na-amalite video akakabarede. Rịba ama na, a na ngwa nkwado ogbe akakabarede. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata multiple videos ka Nexus 7, ị nwere ike mbubata ha n'otu oge. Ma ugbu a, ka ọ na-agba ọsọ na ndabere.
Mgbe ọ mere, pịa "Open nchekwa" nhọrọ na isi interface nke a Video Ntụgharị. Chọta .mp4 mmepụta faịlụ na mgbe nyefee ha gị Nexus 7 site USB. Ị ga-ahụ na ngwaọrụ nwere ike-egwu converted faịlụ nke ọma.
Olee otú Mee Tutorial Videos
Olee otú dọwara Nkiri si nrụọrụ
Olee otú Mepụta Funny Videos